Anja Schaap site na Katwijk n'ehihie na-esote na nzuzo "lie": Martin Vrijland
Anja Schaap site na Katwijk n'emebido ụbọchị ọzọ "liri" na gburugburu mechiri emechi
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 24 June 2019	• 7 Comments
M rịọ mgbaghara, ma ị ghaghị ịghachite ọchịchị Dutch iji kwụsị okwu ahụ n'ụzọ doro anya, ma ànyị na-arụ ọrụ psychological (PsyOps) dị ka Anja Schaap ma ọ bụ Anne Faber. Otú ọ dị, nke ahụ yiri ka ọ bụ mmega ahụ na-enweghị isi, n'ihi na ọ na-eche na ala ahụ, na nkwado ya na ndị mgbasaozi na ndị ikpe, na-etinye obi ebere na ịmepụta ụgha ụgha, mgbe ahụ, a pụkwara ịmepụta ihe àmà nke a ghaghị inye iji mee ka a ghara inwe Obi ebere. Ma ọ bụrụ na onye ọka iwu ahụ amalitela ịghọ aghụghọ ule, mgbe ahụ, ikpe ga-eduga na ihe efu.
Were ya na ị rịọ maka nyocha DNA iji gosipụta nkwekọrịta ahụ na ezinụlọ ahụ a sịrị. Mgbe ahụ, profaịlụ DNA nwere ike ịmepụta nanị site na kọmpụta na profaịlụ nke DNA chọrọ. Ihe efu. Ma ị na-eche ma ọ bụrụ, dịka ọmụmaatụ, ezinụlọ Anja Schaap dị adị n'ezie mgbe ị nọ nkesa iru uju a naanị hụ aha mbụ.
Mepee obi ma nwee ụlọ ọrụ nọọrọ onwe ha na-anwale nyocha DNA wee mee kpọmkwem otu ahụ na ezinụlọ ahụ a sịrị na ọ bụ? Agaghị m achọ ihe ọ bụla karịa ikwenye na nkwenye ma ọ bụ mebie nkwupụta nke arụmọrụ m. A sị ka e kwuwe, ị bụ ezigbo onye na-anụ ọkụ n'obi ma ọ bụrụ na i tinye ụdị edemede a na Facebook:
Nwanyị 33 na-efu maka izu na mgbasa ozi na-akwalite Sherlock Holmes search ngwa mgbe ọ na-eme ya niile Facebook peeji nke jupụtara Sherlock Holmes hints (gụnyere adreesị ụlọ). Ọ ga-aga na cafe na ezinụlọ (ma na mberede na 1 mmadụ na ihuenyo). Mgbe ahụ, ọ na-eche na ọ na-agbagharị n'abalị dum, a na-ahụkwa na ọ hụrụ 3 izu mgbe e mesịrị na oké osimiri site n'aka onye skipper Germany. Naanị akụkọ ihe mere eme na-agafe enweghị ụgbọ mmiri Germany hụ na na (n'elu) Schiermonnikoog 3 nọ ọdụ ruo ọtụtụ awa. Oleekwa otú o si bụrụ eziokwu na ahụ na-efegharị n'ebe ahụ? A ghaghị ịkọ ozi dị otú ahụ na 17 ugboro ole na ole na ndị na-emepụta ihe ndị na-adịghị ahụ anya bụ ndị a ga-ese si na ụlọ ọrụ ha. Otú ọ dị, ọ bụrụhaala na Martin Vrijland abụghị Telegraaf ma ọ bụ NOS na-egosi nke a, onye ọ bụla na-emezigharị. N'agbanyeghị ihe doro anya na ọ bụ ... mgbasa ozi na-anọgide na-akwụwa aka ọtọ, Martin Vrijland na-ejikwa nkwekọrịta. Ka ọ bụ ma eleghị anya, ụzọ ọzọ na gburugburu? Kedu ka o doro anya na ị ga-ahụ ya? Na onye ọ bụla nke nwere ihe dịka nke a, ìgwè ndị agha ahụ na-egosi na okwu ndị dịka "na-abịa n'ili", "Amaara m ya", "hapụ ezinụlọ nanị" na ihe ndị ọzọ.
Ya mere, ana m achọ ka m nwee ohere iji dozie ya na ebe ahụ. Mgbe ahụ, onye ọ bụla na-ekpochapụ ihe ahụ na-adịghị mma (Martin Vrijland) ma ọ bụ onye ọ bụla na-achọpụta na ala na mgbasa ozi na-etinye aka na aghụghọ na aghụghọ. O nwere ike ịbụ na ọ bụghị n'ebumnuche ahụ.
"Ma goddamn Freeland! Ị ka na-ahụ foto foto Anja na nwanne ya nwanyị bụ Jacolien!Ee, m na-ahụ foto. Ugbu a, ị gakwaghị enwe ike ikwu ma foto ndị a sitere n'aka ezigbo ndị mmadụ. Nke a na-emetụtakwa ihe nkiri, ihe nkiri si n'oge gara aga, foto site n'oge gara aga, ihe ndekọ sitere na ese foto nchekwa na ihe ndị ọzọ. Ntak-a? N'ihi na ndị na-emepụta TV nwere ihe onwunwe ruo ogologo oge ịmepụta ihe ndị a na-akpọ deepfakes. "Ee, ma e nwere ndị maara ya!"Ị maghị nke ahụ. Ị na-ekwu okwu na mgbasa ozi mmadụ ma ọ bụ na ụfọdụ ọnọdụ ọnọdụ ndị na-azọrọ na ha maara njirimara isi. Ndị profaịlụ ndị na-ahụ maka mgbasa ozi nwekwara ike ịmepụta ngwa ngwa site na ụlọ ọrụ ndị ọkachamara na profaịlụ miri emi na ndị 'ezigbo ndị mmadụ' nwere ike ịbụ Inoffizieller Mitarbeiter 'ndị nọ ebe a na njikere ịkọ akụkọ ahụ. O nweghị ihe ọ bụla ọ dị ka ọ dị. Na-agụ isiokwu a iji chọpụta kpọmkwem otú ọ dị mfe ọrụ ahụ.
Naanị ihe ị nwere ike ịchọpụta bụ na ngwa ngwa mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ dị ukwuu na ihe, mgbe ndị mmadụ kwusịrị okwu mmetụta uche, a na-ebute iwu ọhụrụ na a gaghị anabata ya n'emeghị ihe omume ahụ. N'ihe gbasara Anja Schaap, o yiri ka anyị na-emeso otu obi ebere na ndị mmadụ ga-abanye na ndị Pokémon Go dinta, ma mgbe ahụ, mmadụ ibe ha. Anyị ga-ebudata Sherlock Holmes ngwa en masse ka ịrara mmadụ ibe gị aka ghọọ ihe egwuregwu Pokémon na ị chere na ị na-eje ozi ezigbo ihe (n'ihi na Anja Schaap, Anne Faber, na ihe ndị ọzọ niile na-efu). N'ọdịnihu dị nso, steeti nwere ike ịchọta onye ọ bụla nke na-agba ọsọ maka ọchịchị ndị uweojii ya, ma n'otu oge ahụ gee ntị (ma lelee) niile telifon ndị ahụ arụnyewo ngwa ahụ.
Kedu ihe ọzọ m na-eche? Ya mere, NFI ma ọ bụ onye a ma ama Anass Aouragh (PsyOp?) Ọkà mmụta ihe ọmụma bụ Frank van de Goot enweelarị ike ime autopsy? Ihe kpatara ọnwu bu ugbua? Ọfọn, nke ahụ amachapụrụ mgbe Frank van de Goot na AD kwuru na ozu ahụ nọ n'ụdị nkwarụ dị ukwuu ma eleghị anya ụdị ihe dị iche iche dị ndụ dị n'ime oké osimiri. Ma, olee otú nke a ga-esi gaa na olili ozu nke na-esote Friday? Ma olee ihe a ga-ahapụ nwanne Anja Anja (nke Jacolien) hapụrụ ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịkụli? Ndi Madame Tussaud ka a ga-etinye n'ime igbe ozu n'ihi na o ga - amalite nụ isi na chọọchị? Nwee obi maka nkenke m, ma echeghị m akụkọ a ruo mgbe ihe siri ike na-abịa. Mana anyi nwere ike ikwanye nke ahu, n'ihi na onye ka nwere ike ichoputa nke "ihe omuma" maka eziokwu?
Anja laghachiri na Katwijk. Ọ ahọrọla obi ya na foto mara mma nke Anja. N'abalị gara leta ya. Ezigbo nwanne m nwanyị na enyi m. Kedu ihe m ga-eche gị
- Jacolien Schaap (JacolienSchaap) June 23 2019
Na Ihu Gị:
M na-ahụ ise anyị na-eje ije n'etiti. Mma anụmanụ pic.twitter.com/BCAwEqWv50
- Jacolien Schaap (JacolienSchaap) June 24 2019
Ihe ndekọ njikọ njikọ: omroepwest.nl, ad.nl
Anja Schaap nwere ike ịhụ ihe oyiyi na 'Nchọpụta rịọrọ' ya mere ọ dịghị Onye Ọzụzụ?
Anja Schaap hụrụ nwụrụ anwụ na oké osimiri n'elu nke Wadden Islands, mana nke ụgbọ mmiri (myshiptracking.com)?
Tags: Anja, olili, lie ya, na, akpata ọnwụ, agba, Frank, Gutter, Holmes, mgbasa, arụ ọrụ, ọkà mmụta ọgwụ, uche, psyop, Atụrụ, Sherlock, van
24 June 2019 na 13: 53
Rịba ama: enwere ike ịbụ na Anja Schaap dị adị.
Mgbe ahụ, ọ ka nwere ike ime ihe (na mkpokọta nke PsyOp).
Akụkọ a nwekwara ike ịbụ eziokwu, ma ihe m na-ekwu bụ na ọ nwere ihe niile e ji mara ya.
24 June 2019 na 16: 59
Ezigbo Martin, i ghaghi imezi ihe ozo ... ndi uweojii na ekwu na O bu ihe mechibidoro.
"Dị ka ndị uweojii si kwuo, ọ ga-ekwe omume na ahụ ga-eti mmiri na Katwijk na, n'ihi iyi, na-agwụ elu n'elu agwaetiti Netherlands nke dị n'ebe ọwụwa anyanwụ."
"Ndị ọrụ ụgbọ mmiri German na-ezute ozu Anja site na mberede."
24 June 2019 na 21: 49
Martin, ị na-ekpori ndụ. I nwekwara ike inwe obi abua banyere 'eziokwu' nke gọọmentị gosipụtara. Ikike nke inwe obi abụọ, na-enwe obi abụọ, bụ nke na-adaba na ya na ọha nkịtị nkịtị. O di nwute, nke a abughi ikpe a bu nke a ga-eduzi.
Ọfọn, ụmụ okorobịa si edemede adịghị amasị ikike inwe obi abụọ. Nke ahụ adịghị ada Hen. Ụmụ okoro a choro ma choo ka ha nweta 'eziokwu' na ihe omuma nke 'eziokwu'.
25 June 2019 na 16: 05
hahaha BNR onwe ya bụ otu n'ime nsogbu akụkọ mgbasa ozi, akụkọ ... 😛
26 June 2019 na 00: 30
BNR Beeldbepalers a na-akpọ usoro ihe omume ahụ. Ha wee kpebie ihe oyiyi gị; nghọta gị banyere ụwa
27 June 2019 na 22: 43
28 June 2019 na 08: 21
N'akwụkwọ twitter nke Jacolien Schaap, ọ bụ ihe doro anya na Jacolien nwere nchegbu banyere okwu Thierry Baudet, nakwa n'oge oge efu nke Anja, ọ na-akọrọ ọtụtụ akụkọ gbasara mgbochi Semitism.
" Ndị Netherlands adịghị aghọta ọnọdụ ha nọ na ya: nchọpụta ụlọ mkpọrọ Stanford
Kedu ihe ha bụ na ogologo oge ka ihe ahụ dị? »
Nleta nile: 16.122.954
Tụlee op Coronavirus sitere na China na-enye alibi zuru oke maka ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi zuru ụwa ọnụ
SandinG op Canada: Dr. China Dr. Xiangguo Qiu na agha nje virus nke Wuhan iji mee ka China dabere na China maka mmezi
Martin Vrijland op Canada: Dr. China Dr. Xiangguo Qiu na agha nje virus nke Wuhan iji mee ka China dabere na China maka mmezi